I-BF5 Hacks 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
YOKUQALA 5 IZIKHONO
I-Gamepron inelona dabi lilungileyo le-5 Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil ukoyisa zonke iimfuno zakho zokugenca. Umdlalo uphumelele ngokulula xa ukhetha ukukopa ngezixhobo ezinokuthenjwa ezivela kwiGamepron!
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge i-Battlefield 5 hacks, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Idabi 5 Hacks
Idabi leMfazwe 5 iHacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Idabi 5 IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuthenga iihacks apha kwiGamepron
Ngeempawu ezininzi ezikhoyo, khetha ii-hacks ezifanelekileyo ezifanelekileyo iimfuno zakho ngokupheleleyo
Zonke iintlawulo zakho ziya kuphathwa ngumqhubekekisi wethu wokuhlawula kuphela
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela i-Battlefield 5 Hacks!
Nje ukuba ube nesitshixo semveliso ngokwakho, unokukhuphela i-BF5 Cheat!
Kutheni usebenzisa i-Gamepron Battlefield 5 Hacks?
Uza kufumana okuninzi njengoko uzimisele ukubeka kumdlalo onje ngeMfazwe yesi-5, yiyo loo nto uninzi lwabathengi bethu bebala kuthi ukuba siphuhlise isixhobo esithembakeleyo kwiimfuno zabo ze-BF5. Zininzi iindlela zokujongana nenkqubo yokukhohlisa, uninzi lwazo oluya kubeka i-akhawunti yakho emngciphekweni- ukuba ukhetha ukuthenga ii-BF5 cheats kwi "shady source", ubophekile ukukhuphela uhlobo oluthile lomxholo onobungozi. Cinga malunga nokuba bangaphi abantu abaqhotsiweyo kwiikhompyuter zabo kuba bengazithengi kwinkonzo yobungcali! I-Gamepron inikezelwe ukubonelela abasebenzisi bethu ngobuninzi bezixhobo kunye neempawu zokuphucula amava abo emidlalo, kwaye sikwenza oko ngexabiso elifikelelekayo (xa kuthelekiswa nabanye ababoneleli beprimiyamu kwintengiso).
Ngelixa ukukopela kufumana igama elibi ngamanye amaxesha, kuyacaca ukuba iseyeyona nto idume kakhulu xa usenza umdlalo kwi-Intanethi. Ukuseta kuya kuhlala kukhuphiswano ngaphandle komdlalo owudlalayo, kodwa iBala leMfazwe lesi-5 liza kuziva ngathi likhona ngaphezulu i-surreal! Ukuphumelela kumdlalo onje kungathatha iminyaka yokuziqhelanisa nokusebenza nzima okanye ngokukhohlisa ngokuchanekileyo kwe-BF5- xa uthenga iihacks zakho kwiGamepron, uyazi ukuba imali ichithwa kakuhle.
Singabathembisa abathengi bethu abakumgangatho ophezulu wedabi lokulwa ama-5, kwaye yinto ezo ezinye iinkonzo ezingenakubanga ngokwazo. Ngenxa yoko, singazithatha njengomboneleli okhokelayo wazo zonke iiMfazwe eziMfazwe ezi-5. Nokuba unomdla kwi-BF5 Aimbot okanye i-BF5 ESP ayinamsebenzi, kuba sinokukunceda ukuba ufikelele nakweyiphi na impawu oyifunayo. Zibophezele kuwe kwaye uqalise ukuphumelela imidlalo emininzi! Iimephu zinkulu kwibala lomlo lesi-5, oko kuthetha ukuba sisebenzisa ukuthandwa kweendawo zethu zokulandela umkhondo (njengeMfazwe yesihlanu ye-ESP kunye neWall Hack okanye indawo yemfazwe yeenyawo ye-5) kuya kukunceda uchume ngeendlela ezininzi kunenye.
Ngaba ukulungele ukusebenza kunye nenkampani ethembekileyo enomdla onayo engqondweni? Nantoni na oceba ukuyenza ne-BF5 Hacks ixhomekeke kuwe, kodwa okokuqala, kuya kufuneka ukhusele isitshixo semveliso ngokwakho. Sinikezela ngeendlela ezimbalwa ezahlukeneyo zokukhetha ixesha kwaye ziya kuhlala zinokuguquguquka ngokunokwenzeka kunye nabathengi bethu, ke ulinde ntoni? Qalisa ngeMfazwe yethu ye-5 Hacks namhlanje!
Idabi lomlo 5 Wall Hack (ESP)
Idabi ledabi 5 Ulwazi lomdlali i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Idabi 5 Item ESP enezihluzo
Idabi 5 Aimbot
Indawo yemfazwe 5 izilumkiso zezilumkiso zotshaba
Indawo yemfazwe 5 imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Idabi lokulwa 5 ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Idabi 5 Buyisa umbuyekezo
Ngokufanelekileyo BF5 yimfumba Iimbonakalo
Ii-BF5 Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iiWall Hacks kunye nokunye
BF5 Wall kugula (ESP)
Sebenzisa ibala lethu lomlo 5 Player ESP ukugcina indawo yotshaba, ikuvumela ukuba uzibone zombini iindawo eziqinileyo nezintle.
BF5 Ulwazi lomdlali i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Awunakho nje ukubona iimodeli zomdlali ngokuqina / iindawo ezi-opaque, njengoko ubona ulwazi lomdlali (igama, impilo kunye nomgama).
BF5 Into ESP eneefilitha
Sebenzisa indawo yethu yemfazwe 5 Into ye-ESP enezihluzo zokuchonga iingxaki ezinokubakho kwindawo ekungqongileyo (njengeMigodi yoMhlaba okanye ezinye iziqhushumbisi ezinokubulala).
Thatha konke uhamba ngeBF5 Aimbot yethu! Ngale njongo ingenakuthelekiswa nanto, akukho mphefumlo kule planethi uya kuba nakho ukunqanda.
Umkhondo weBF5 Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Sebenzisa umkhondo weBullet Track ngaphakathi kwibala lethu leMfazwe 5 likaHack ukugcina umkhondo wokuba indawo yakho ifika phi (ilungele ixesha elifutshane ukuya kumbindi womgama)
I-BF5 isilumkiso sesilumkiso sotshaba
Imiyalezo yesilumkiso iya kuvela kwiscreen sakho nanini na utshaba lusondele okanye lwenzeka nje ukuba ujonge kumlinganiswa wakho.
I-BF5 imowudi yokutsiba super (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Sebenzisa i-Super Jump Mode ebandakanyiweyo kwindawo yethu yeMfazwe yesi-5 ukuze uzinqande ekuthatheni umonakalo! Tsiba ngaphandle kweenqwelomoya zemfazwe ngokuzithemba usebenzisa iGamepron.
BF5 ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Idabi lethu leMfazwe i-Aimbot ye-5 iza nezixhobo ezithandwayo ze-Bone Prioritization kunye nezinye izinto ezinokulungiswa ukuba usebenze nazo-bulala ngokulula!
I-BF5 aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Inkqubo yokuKhangela ebonakalayo ibonakala xa usebenzisa idabi lethu ledabi i-5 Aimbot, njengoko uza kuba nakho ukuqinisekisa ukubulala kwakho ngaphandle kokukhathazeka xa eli nqaku lenziwe.
BF5 Buyisa imbuyekezo
Ukuphinda ubuye akunakuze kulunge ngexesha lokulwa umpu, yiyo loo nto uya kufuna ukuwususa usebenzisa iRecoil Compensator xa kunokwenzeka!
Yiba nguMdlali oBalaseleyo weMfazwe 5 kwiPlanethi
Sonke sifuna ukuba ziincutshe ebomini, kwaye ngamanye amaxesha oko kuya kufuna "uncedo" oluncinci. Sukuyithatha ngokungakhathali iBF5 yethu, njengoko zininzi izinto ezaneleyo zokugcina ulungiselele ukuphumelela kwakho ngokungenakuphepheka ngomdlalo ngamnye. Azikho ezinye iindlela ngaphandle kokusebenzisa i-BF5 Hack, njengoko i-Gamepron iza konakalisa indlela oziva ngayo ngayo nayiphi na enye into enokubakho.
Idabi leMfazwe elidumileyo 5 iiHacks kunye nokukhohlisa
Idabi 5 ESP kunye neWallhack
Elinye ibala ledabi 5 iiHacks kunye nokukhohlisa
Ngaphandle kwezona zinto zidumileyo zisetyenziswayo, ukusebenzisa i-BF5 Hack ngekhe kukwenzele nto. Xa ungakhange uthandwe yi-BF5 Aimbot, i-BF5 ESP kunye neWall Hack, okanye inqaku lokususwa kweBF5, kuyakubakho amaxesha apho abasebenzisi bakho bacinga ukuba i-hack ilifanele ixabiso. Ngelixa sinokugcina indawo yethu yeMfazwe yesi-5 eHack zinezixhobo ezifanelekileyo, sikwazile ukwazisa izimvo ezintsha kraca kumxube. Ngelixa unokusetyenziselwa indlela yesiqhelo yokuqhekeza (oko kuthetha ukuba uqhele ukusebenzisa ngokungqongqo iAimbot kunye neWall Hack), iGamepron izakuba lutshintsho oluhle lwesantya sakho.
Sinikezela ngeyona mibala mihle kuyo yonke imidlalo oyithandayo, kwaye iBala leMfazwe 5 alikho ngaphandle. Asikukuboneleli kuphela ngezinto ezininzi ezahlukeneyo oza kusebenza nazo, kodwa sikwenza oko ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo.
Kukangaphi uphulukene nomdlalo ngenxa yokungakwazi ukujongana nobushushu bompu? Baninzi abantu abanomdla kwibala lomlo 5 Aimbot ngokwabo, njengoko izakwenza ukoyisa inkqubo elula ngelixa udlala. Unokukhetha xa kuziwa kubadlali beqela, kodwa nokuba unabahlobo bokuzibandakanya kulonwabo okanye akunangxaki! Xa unayo i-BF5 Aimbot yethu othembele kuyo, umchasi uya kucinga ngobomi babo ngayo yonke into ayifunayo. Ukuba awuyicimi indawo yokungenisa ngokukhawuleza, asiyenzi imisebenzi yethu ngokuchanekileyo! Ayizukubaneyokuqala kwi-Bone Prioritization, kodwa inqaku le-Auto-Aim / Fire liyinkwenkwezi. Ngeenjongo ezi-Smooth kunye nezinye iindlela ezinokuqwalaselwa ukugcina abachasi bakho beqikelela, kukuphumelela.
Akunyanzelekanga ukuba uchithe lonke elo xesha uzama ukuphucula ubugcisa bakho, njengoko unokwenza nje i-BF5 Aimbot yethu kwaye ubukele ukubulala kuqala ukufumba.
Xa ufuna i-BF5 Hack ekhuselekileyo nenokuthenjwa, i-Gamepron ibuyela umva. Ungaphumelela ngendlela engakumbi ngokusebenzisa i-Battlefield 5 ESP kunye neWall Hack, njengoko abanye besithi yeyona ndlela ilula yokuphucula izakhono zakho. Uyakwazi apho abantu baya kuhlala khona enkampini ngokungaguquguqukiyo, njengoko uza kubona abadlali babo amathambo ngokusebenzisa iindawo eziqinileyo / ezi-opaque- ungabona okuthandwa yi-Item ESP ngezihluzi, ekuvumela ukuba ufumane umpu ongcono kunye nosongelo olunokubakho (njengoMhlaba Imigodi okanye ezinye iziqhushumbisi) ezijikeleze imephu. Umdlalo weqonga owufumanayo kwiMfazwe yesi-5 uziva ngathi uyimfazwe yokwenyani ngamanye amaxesha, yiyo loo nto ke kufuneka ube nesandla esiphezulu kangangoko.
Uyabona ukuba ngoobani amagama abo ngokusebenzisa i-BF5 ESP yethu, kunye nezixhobo abazisebenzisayo kunye nokuba banempilo engakanani. Umgama wabo unokubonwa ngokunjalo, njengoko oko kuya kukugcina ulumkile kwaye ukulungele ukuqengqeleka.
Ngaba ujonge ukubamba abachasi bakho njengexhoba lasendle? Ungabazingela njengexhama xa unikwe uphawu lweNyawo, kuba uya kuba nakho ukubona imikhondo ekhokelela ngqo kutshaba. Eyona ilungileyo kwabo bathanda ukuzimela ujikeleze, ungazisebenzisa zombini iiNyawo kunye noMonakalo oMkhulu ngokungenamthungo - ukudubula abantu ngasemva akukaze konelise ngaphambili! Nokuba ungumdlali onoburharha okanye othanda ukuntywila, usebenzisa inqaku lethu loMonakalo oMkhulu kuhlala kukubeka kwindawo engcono yokuphumelela. Inqanaba lomgama ikwaluchukumiso oluhle, njengoko ikuvumela ukuba ubone ukuba zikude kangakanani izoyikiso zakho ezinokubakho.
Ukuba ubukhe wadlala iBarfield 5 okwethutyana, uyaqonda ukuba iimephu zikhulu kwaye kuya kubakho ithuba lokuzimela kwindawo yokuchasana nabachasi bakho. Awusoze uphinde uphulukane ne-BF5 Hack eyenziwe ukuba isebenze, ukuba sinako ukukuthembisa.
Ukulima okutsala ukubulala ngumoya ovuthuzayo xa usebenze Umonakalo oMkhulu, kwaye oko kungangqinelana nokuba yinyani xa unokuthatha isigqibo sokuvula iBF5 Aimbot ngaphezulu kwelo! Nokuba yeyiphi na into oyikhangela kwi-BF5 Hack kunokwenzeka ukuba ibekhona apha, kwaye ukuba ayizizo, zive ukhululekile ukunxibelelana nathi-siyathanda ukuthatha iingcebiso kubasebenzisi bethu, ngakumbi ukuba banoluhlobo oluthile lokuqonda abanokukunika . Asipheleli nje ekumeni kwindawo yakho yesiqhelo ye-BF5 Aimbot kunye neBF5 Wall, njengoko kukho ezinye izinto onokucinga ngazo ngaphambi kokuba uthenge. Njengoko besesitshilo ngaphambili kukho iNdlela yokuTsiba okuMkhulu okubandakanyiweyo kwibala lethu leMfazwe elingu-5, nto leyo ekuvumela ukuba uthathe umonakalo ngaphandle kokufa. Awuyi kwenzakala nakwezona ndawo ziphakamileyo onokuzithelekelela!
Olunye uphawu olucocekileyo kufuneka lube lukhetho lwesilumkiso, oluya kubonisa umyalezo owenziwe ngokwezifiso kwiscreen sakho nanini na utshaba lusondele.
Ii-BF5 iiHacks imibuzo
Kutheni i-BF5 Hacks yethu
Abantu beza kuthi ngenxa yabo bonke Battlefield zabo 5 iimfuno lomnqweno yimfumba kuba bayazi ukuba malunga nomgangatho apha Gamepron. Asizukusika iikona kwaye sizame ukutsala okukhawulezayo kubathengi bethu, kuba loo nto ayenzi ngqondo-sifuna ukwaziwa njengomphuhlisi okumgangatho ophezulu wehacks, kwaye ekuphela kwendlela yokwenza oko kungokwakha ukuthembana.
Kutheni iBF5 Aimbot yethu
Iintshaba ziya kucinga ukuba zinethontsi kuwe, kodwa uya kubenza bacinge kwakhona ngokusebenzisa iBala leMfazwe i-5 Aimbot. Ngenjongo ye-stellar engenakulinganiswa nabona badlali babalaseleyo, uya kuba nokuzithemba (kunye nokuchaneka) okufunekayo ukukhupha onke amaqela uwedwa. Ukuba yingcuka eyedwa kwindawo yokulwa yesi-5 khange khe uyive yanelisa le!
Kutheni iBF5 ESP yethu
Ngokusebenzisa ibala lethu lemfazwe i-5 ESP, uzibeka ethubeni lokugqwesa nokuba ungubani na. Xa unokubona izoyikiso ezinokubakho ngohlobo lweemodeli zomdlali kunye nokuqhuma kwe-ESP, kuncinci okuya kukubulala kumdlalo. Uya kuhlala uyazi ukuba injani imeko ngaphambi kokungena kwi-BF5 ESP yethu!
Kutheni iBF5 Wallhack yethu
Khawufane ucinge unamagunya e-superhero ngelixa udlala iMfazwe yesi-5-intle kakhulu, akunjalo? Yiloo nto eyenza ibala lethu leMfazwe elingu-5 kuWall Hack liluncedo, njengoko uninzi lwabadlali beqonga lomhlaba jikelele belusebenzisa ukubona ukuba zifihle phi iintshaba zabo. Akunyanzelekanga ukuba ujike kancinci kwikona kwakhona
Kutheni iBF5 Norecoil yethu
Ukuphinda kuyacaphukisa, ininzi into esingavumelana ngayo- kutheni ungayisusi ngokupheleleyo ngokusebenzisa i-Battlefield Recoil Compensator? Akunyanzelekanga ukuba uthandaze ukuba ukubuyela kwakhona okungahleliwe kumpu wakho kukuvumela ukuba ubulale utshaba, kuba awuzukujongana nalo kwasekuqaleni. Ngokwenyani inguquko yomdlalo, kunye nenqaku ongafanele ukulijonga.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo zeBF5?
Unokuzikhuphelela indawo ebalaseleyo yeMfazwe emi-5 eHacks apha kwiGamepron. Siyazi ukuba wonke umphuhlisi womnatha emhlabeni uya kuthi banezona "zixhobo zilunge kakhulu”, kodwa ukuba ukhe wasebenza nathi ngaphambili, uyazi ukuba asizukuphazamisa.
Kutheni le nto ii-BF5 hacks zakho zibiza kakhulu kunezinye
Sinenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka ezifumanekayo ukuze abantu bazisebenzise apha kwiGamepron, oko kuthetha ukuba asinakho ukubonelela wonke umntu ofuna ukusebenzisa indawo yethu yeMfazwe yesi-5. Ngenxa yoko, kuye kwafuneka sitshintshe amaxabiso ethu ngokufanelekileyo-ayisiyiyo inkonzo yethu kuphela ukuba isebenzise, ​​kodwa ikwabonelela nge-100% ye-hacks ezingafumanekiyo.
Kukho ixesha eliya kulungela iimfuno zakhe nabani na. Sinikezela ngezixhobo zethu zemveliso mihla le, ngeveki, okanye ngenyanga- nantoni na oceba ukuyenza ngee-hacks kufuneka zifezekiswe ngokulula, njengoko sele usazi ukuba lingakanani ixesha olisebenzisileyo izixhobo zethu. Ngala maxesha, uya kuba nokufikelela okungenasiphelo kumlo wethu wedabi 5 Hacks!
Onyuliweyo wethu BF5 Hacks
Kuhle BF5 yimfumba Iimbonakalo